Ahmed Y. Hassan – Page 4
Posted on January 15, 2020 Leave a comment on ITAALKAAGU waxa uu leekaadaa hadba inta uu HADAFKAAGU leegyahay
Gig economy is a free market economy in which temporary positions are common and organizations contract with independent workers for short-term engagements. The term “gig” is defined as a job for a specified period of time and is typically used in referring to independent worker. Examples of gig employees in the workforce could include freelancers, independent contractors, projects based workers and temporary or part-time hires, independent business holder etc…
Posted on January 12, 2020 Leave a comment on GIG ECONOMY
Buugga ‘INSIDE AL-SHABAAB The Secret History of Al-Qaeda’s Most Powerful Ally’
Buugga ‘INSIDE AL-SHABAAB The Secret History of Al-Qaeda’s Most Powerful Ally’ oo ay dhawaan soo saareen labo wariye; Haaruun Macruuf iyo Dan Joseph, waxa uu lafagurayaa sooyaalka unkankii iyo kobocii ururka “dhaqdhaqaaqa dhalinyarta mujaahidiinta ah –Alshabaab” oo ka mid ah ururada ugu xagjirsan uguna gacan kulul bariga Afrika iyo qofafkii salka u dhigay aragti ahaan iyo farsamo ahaanba.
Waxa uu buuggu wareysanayaa shakhsiyaad xog ahaan muhiim ah sida xubno ka soo goobstay ururka, kuwo hore ula soo shaqeeyay, aqoonbaadheyaal si dhaw ula socday iyo dhibbaneyaasha ururka ee ku baahsan deegaannadii gacanta ugu jiray oo qaarkood yihiin kuwo la askareeyay maskax ahaan iyo muruq ahaanba.
Hordhaca ka dib waxa uu buuggu u hollashada xagjirnimada Soomaaliya ku furfuranayaa sheeko ku saabsan wiil yar oo soo kacaamaya, magaciisu waa Dalxa Cali, waxa ay hamuumtiisu ahayd in uu noqdo caalim diineed waxaanu ka fikirayay sidii uu barashada shareecada islaamku ugu bixi lahaa dalka dibaddiisa, waxa uu ahaa wiil qunyar socod ah oo dabeecad dabacsan sababta oo ah waxa uu ku xidhnaa kooxda camalkasan ee Tabliiqa! Hase ahaato e duruufta ka jirtay Muqdisho ma ahayn mid dabacsan oo nabdoon; hoggamiye kooxeedyada oo in badan kadeedi jiray dadka deegaanka ayaa markaasi dardar ku waday dagaal ugaadhsi ah oo ay maalgalinaysay Wakaaladda dhexe ee sirdoonka Maraykanku –CIA, waxa la beegsanayay islaamiyiinta u firfircoon fikirka jihaadiga ah oo uu Maraykanku rabay in la soo qabto ama la laayo, Hoggaamiye-kooxeedyada oo aan garasho u lahayn astaamaha kala saaraya islaamiyiinta xagjirka ah iyo kuwa qunyar socodka ah waxa ay wada beegsadeen islaamiyiinta oo dhan, ka dib dagaal is ugaadhsi ah oo muddo socday waxa Muqdisho ka qarxay dagaal loogu kala miirmay Hoggaamiye-kooxdyo uu Maraykanku taageerayo iyo islaamiyiinta oo hiil ka helaya shacab in badan u dul yeeshay hagardaamooyinka qabqableyaasha.Dalxa Cali, wiilkii sirmaqabeha ahaa ee, sida guud ahaan reer Muqdisho, necbaa qabqableyaashu waxa uu si kedis ah oo aanu ka baaraandegin ugu biirayaa dagaalka magaalada lagaga xoreynayo mooryaanta laguna difaacayo dalka iyo diinta! Tallaabadaasi uu qaaday waxa ay ugu dambeyn la galaysaa unugga ugu khatarsan ururka Alshabaab oo ahaa garab ka tirsan isbahaysigii maxaakiimta, waxaanu ahaa garabka yoolka u ahaa barnaamijka “la-dagaalanka argagixisada” ee Maraykanku ka hawlgaliyay qabqableyaasha, waa garabka gabbaadka siinayay shakhsiyaad uu Maraykanku raadinayo isla markaana ay ka tirsan yihiin soomaali uu ku raadjoogo oo xidhiidh la leh jihaadka caalaamiga ah.
Waxa uu Dalxa yare jidku la galay unugga qoorgoynta iyo qaraxyada u qaabilsan Alshabaab! Muddo markii uu ku jiray hawlgalladadaa halista badan ayaa maalin loo xilsaarayaa khaarajinta nin la ogaaday in uu aad ugu noqnoqdo madaxtooyada Soomaaliya, intuu uu qorshaha waday waxa uu Dalxa ku ag tukadanayaa “murtadkii” yoolka u ahaa, markii uu salaadda ka baxayna waa uu ka dababaxayaa, si khilaafsan amarkii uu haystay, waa uu joojinayaa ninkii waxaanu weydiinayaa waxa uu ka doono qasriga “murtaddiinta”! ninkii waxa uu ugu warcelinayaa in wiilkiiisa oo ka tirsan Alshabaab ay dawladdu qabatay ka dibna ku xidhay jeel madaxtooyada ku dhex yaalla oo ay ku jiraan maxaabiis Alshabaab laga qabtay, sidaa awgeed uu cuntada ugu geeyo uguna noqnoqdo!
Waxa suurowda in sababta Dalxa uu bilowgaba uga hakaday khaarijinta “murtadka” ee uu ugu leexday weydiintu ahayd weydiimo isaga ku dhashay oo nuxurkoodu yahay ‘waxa murtad ku kallifi kara in uu tukado’! goortii uu hubiyay in ninkani uu dhalay midka ka mid ah “mujaahidiinta” isla markaana uu kaalmeeyo waa uu sii daayay waxaanu taliyihiisii gaadhsiiyay ‘gefka weyn ee dhici gaadhay’ se, si ka duwan sidii uu filayay, taliyihiisu ma muujin wax dareen qoomamo ah! isna waa uu u qaadan waayay waxaanu is weydiinayaa ‘imisa qof oo aan waxba galabsan ayaa tolow ku maqan gacanta Amniyaadka oo ah unugga qaabilsan dilalka qorsheysan dadka qaarna ugu yeedhaan “dhakojabiyeyaasha”’?!
Arrintaasi waxa ay baraarujisay Dalxa yare oo u goostay xukuumaddii sheekh Shariif, waxa uu magan galay wasiirkii arrimaha gudaha kana tirsanaa islaamiyiintii maxaakiimta; waa Cabdilqaadir Cali Cumar oo isaguna ka faaiideystay tababarka sarreeya ee Dalxa Cali kana dhigtay ilaaladiisa gaarka ah! Dalxa waxa uu ka hawlgalay madaxtooyada oo uu ka tirsanaa xafiiska wasiirku waxaanu si fiican u kala bartay qaybaha Villa Somalia, waxa uu se ku xumaaday shaqada oo aanu si joogta ah u gudan jirin, saaxiibbadiisa qaar waxa ay sheegaan in uu ku noolaaday xaalad nafsadeed oo burbursan oo laga filan karo qof filashooyin badan lahaa ka dibna galay halgan arxan daran oo haddana ogaaday in uu gefsan yahay ama u jid dhibaato badan u soo maray ujeeddo aan macno lahayn ka dibna jidkii uu kaga baxsan lahaa kula dhammaaday isla gawaankii oo uu dhanka kale ka soo galay!
Waxa uu shaqadiisa sagsaagaba habeen ayaa uu soo galay madaxtooyada goor ay ilaaladu dabacsan tahay ka dibna waxa uu isku qarxiyay badhtahama Villa Somalia isaga oo loo badinayo in uu beegsanayay qof muhiim ah oo noqon karayay madaxweyneha Soomaaliya ama raysalwasaareha amaba wasiirkii gudaha ee uu badqabkiisa ka masuulka ahaa! Qaraxaasi waxa ku dhintay oo qudha Dalxa oo sida loo arkay ah naftii-dile looma-ooyaan ah ama sida uu isu arkayay ah naftii-hure shahiiday amaba dhab ahaan ahaa fal caalwaa ah oo ka dhashay macna-beelka nolosha ee xiga jugaha nafsadeed ee ka dhasha duruufaha niyadjabka abuura!
Waa sheeko xanuun badan oo tusaaleynaysa sida duruufta Soomaaliyada qasani ugu qasabtay dhallaan badan xaalado aanay ka soo waaqsan karin iyo in dambiileyaal badani ay marka horeba dhibbaneyaal u yihiin duruufta deegaankooda!Source = Inside the Alshabab
Posted on January 8, 2020 Leave a comment on Buugga ‘INSIDE AL-SHABAAB The Secret History of Al-Qaeda’s Most Powerful Ally’
Posted on January 8, 2020 January 8, 2020 Leave a comment on Aayatullaahi Khumeyni
Five book you must read before you died
Successful people read, successful people listen and successful people never stop learning growing and evolving who you are yesterday who you will be tomorrow is going to be no better if you are not growing you are falling behind if you want grow you must start injecting your mind with new in formation always looking for new spark some thing to light a fire inside .
Here five books that will help you to rise a new level in your life in every area Financially, spiritually and physically
number 1 Think and grow rich by napoleon hill a true gold mine for your mind filled with golden nuggets this book could change your life in any given chapter just try and find a highly successful person who has not read this book I doubt exits thinks and grow rich is the book said to have created more millionaires than and other book in history you will learn the secrets and principles which when applied work just the same today you learn practical steps on how to transform your dreams into reality and how to apply all the traits of successful people to your life if you have not read it yet and you are serious about success make this you firs purchase .
Number 2 Unlimited power by tony Robbins written by possibly the greatest success coach of all time Tony Robbins unlimited power will guide you into discovering what you really want for your life it will teach you a things human psychology how to reprogram your mind in minutes and eliminate any fears or phobias you may have tony will also teach you how you can do duplicate the success of other people through proven practices it must ready if you are truly serious about becoming successful and understanding how the human mind works
Number 3 How win friends and influence people by dale Carnegie if you wan to enhance your relationship with others personally and in business if you want understand how to genuinely create and maintain positive relationship and create with any one if you want to understand how to communicate with any one to get that job to land that deal to create this book is for you its no wonder this has sold 15million copies the practical advice given by date Carnegie’s will transform your life
Number 4 The 4 hour work week by Tim Ferris’s if you want to be more productive spend less time working and make more money in the process this one for you eliminate every thing from your life that takes your time for little reward and create more time for living you might not be able or want to work any 4 hours per week but if you can work less and earn more this will be a very smart investment number
Number 5 The 7 Habits of highly Effective people By Stephen R. Covey learn how successful and effective people operate dive deeper into the 7 habits covey says effective people share
3. Putting firs thing first
5. Seeking first understand then to understood
Posted on January 8, 2020 January 21, 2020 Leave a comment on Five book you must read before you died
BUUGII MAANKAYGA RUXAY “DOCTOR IN THE HOUSE”
Waa buugii uga la yaabka iyo Tusaalaynta badnaa intaan ku jiray wax ka Ogaanshaha Taariikha dhan dhaqaale iyo mid bulsheed ee umadi gaadho si ay cibro iyo Hore u socod igu noqto Dadaaladii iyo Mahdhooyinkii uu reebay Dr mahadir mohamed Raysal wasaaraha mar labaad ku soo laabtay Malaysia intaan taariikh iyo Ashqaas badalayey umadooda baadhyay Dr mahdir mohamed waa hogaamiyihii Aad ka u qabsaday maankayga .
Hal ku dhigga DR MAHADIR MOHAMED dhextaalka u ahaa hawl qabadkiisu waxa uu ahaa Hufnaan, hawlkarnimo iyo aaminaad,
Horumarka iyo badhaadhaha ay bulsho gaadho ee mahadhada reeba, waxa jirta cid ku suntan oo calanka u sidda. Ciddaasi oo facyaal badani ay ka sheekeeyaan hawl-qabadkeedii kuna ma jiirtaan, isla markaana u noqota tusaale ay marar badan higsadaan kuna hal qabsadaan.
Dr mahadir Mahomed Shaqsigii sameeyey Isbadalada Layaabka Lahayd ee Malaysia Casriga ee lagu Timaamo Economic Tigers of Pacific .
Buugiisa Xasuus qor “A doctor in the house’’ ayuu nalagula wadaagay qorashayaashiisi malawaalka ahaa ee markii danbe isku Badlay xaqiiqooyin jira Si fudud waxa uu inoo taabsiinayaa suurtagalnimada midaynta bulsho qaybsan dhan walba, horumarinta dal dib udhacay dhinac kasta, badhaadhe gaadhsiinta bulsho aynigeed ka hadhay, iyo intaasiba in ay ka iman karto bulshada dhexdeeda oo qof iyo qofof aan badnayni ay gaadhsiin karaan meelo laga nafsad jabay gaadhiddooda.
Buuggu waxa uu ka kooban yahay in ka badan 800 oo bog oo ay ku guda jiraan 62 cutub, taasi oo ka dhigaysa xasuus qorkii ugu badnaa ee aan akhriyo ilaa hadda. Waxa uu ku qoran yahay Af-ingriisi, waxaana markii ugu horraysay la daabacay 2011. Sidoo kale waxa la daabacay 2014 iyo 2015. Hannaanka uu u qoran yahay waa mid aan ku sallaysnayn sida ay dhacdooyinku isugu xigaan balse waa uu isku dhex filiqsan yahay in kasta oo cutub kastaa ka sheekaynayo mawduuc gaar ah, haddana waa kuwo meelaha qaar xidhiidh leh.
Akhriska buuggani waxa uu faaido u leeyahay cid kasta oo danaynaysa ogaanshaha horumarka dalalka soo koroya, iyo sida uu ku soo bilaabmay. Sidoo kale waxa dheef ka heli dhinacyada xiiseeya arrimaha dhqaalaha, taariikhda, siyaasadda iyo casriyaynta bulshooyinka- cidina in aanay ku qadayn Ayaan filayaa.
Siday u eekayd Malaysia Hore khayraadka siday u qaybsadeen Ka hore Mahadir Intaanu Iman Siyaasada
WAX ARAG WAXAY U EEKAAYEEN SOMALILANDTEENA OO QAYBSIGA KHAYRAADKU AY CID GAARA GACANTA UGU JIRTO :
In khayraadka iyo qaybsiga dhaqaalaha loo sinnaado waxa ay sare u qaaddaa kalsoonida wadareed ee bulshadu isku qabto, waxayna xoojisaa dedaallada horumarinta. Salluug kasta oo bulshada badhkood ay arrinkaas ka qabto iyo sadbursi kasta oo jira na, waxa uu joogteeyaa dib u dhaca- waayo bulshada inta u aragto in laga eexday waxa ay horumarka dalka kala maqan yihiin xirfaddooda, xooggooda iyo aragtidooda ba. Xilligii uu Mahathir xilka qabtay, hannaanka qaybsiga khayraadka dalku waxa uu ahaa
mid dhinac u xaglinaya. Tusaale ahaan bulshada malay oo wadarta guud ee dadka mallaysia ka ahayd 60% waxa ay lahayd 2% saamiyada sharikadaha waawayn, halka bulshada chines ka ah oo 30% ahayd ay lahayd 30% saamiyada sharikadahaas, ku dhawaad 60% na waxa lahaa ajanabi, dadka kale oo idilna waxa ka dhaxaysay inta soo hadhay. Waxa ay ahayd hab ay ka dhaxleen guumaysiga kaasi oo sidaa u qaybiyay, caadiyan waxyaabaha ay ka sinnaayeen guumaystayaashu waxa ka mid ahayd in talada iyo dhaqaalaha badanaa ay u gacan galiyaan dadka kuwa tirada yar, taasi oo ahayd xeelad u fududaynaysay in fadhataystaan khayraadka xaddiga ay doonaan kolka ay damcaan xasilloonidarrana si fudud u fulin karaan, iyaga oo adeegsanaya dadkii ay kolkii hore ka eexdeen.MAHADHOOYINKII DR MAHADIR MOHAMED
Mid ka mid ah mahadhooyinka waxtarnimo ee dadyowga muslimiintu aanay illaawin waa gurmadkii uu u fidiyay muslimiintii lagu gummaadayay yurub siiba Bosnia, halkaasi oo dhegta dhiigga loo daray 200,000 oo barbaar u badan, dumarkiina lagu fara xumeeyay. Mahathir dawladdiisa mallaysia waxa ay halkaasi u dirtay kumnnaan ciidamo ah si degdeg ah waxaana ay u qaybisay bosniyiintii hub fudud oo ay isku difaacaan. Gummaadkaasi oo dalal badan aanay wax diidmo ah ka muujin siiba reer galbeedku, meelaha qaar waxaaba la soo gudbiyay in taageero ay u fidiyeen kuwii laynta waday iyo dad magangalyo u galay xeryaha NATO oo lagu gummaaday isla xeradii.
Waxa kale oo xusid mudan in Mahathir uu aad uga soo horjeeday duullaankii maraykanku ku qaaday dalka ciraaq 2003, isaga oo in badan isku deyay in uu baajiyo.
Maxaa aynu ka baran karnaa isla markaana kaga dayan karnaa?
Astaamo hoggaamineed ‘’KALSOONIDA KA GONAANSHAHA
kudhaca iyo dhiirrashada
Wadaninimadu in aanay Ahayn inta Maanka lagu Hayo Balse ay Ka gudo Balaadhan Tahay
Daah-furnaan iyo isla xisaabtan
Waxaynu ka baran karnaa in shaqsi Kaliya uu badali karo umada dhan
Iyo kumakun Anan Halkan ku Xusi Karin
Abdirahman Ahmed warsame
Book Doctor in the House ee Dr Mahadir Mohamed
W/Q : Ahmed Yousuph Hassan
Email : ecoahmedyousuf@gmail.com
Tell : 252634765429
Senior Economist, Aqoon Baadhe, Akhriste iyo falanqeeye madax banan
Hargeisa Somalia .
Posted on September 22, 2019 September 23, 2019 Leave a comment on BUUGII MAANKAYGA RUXAY “DOCTOR IN THE HOUSE”
5 Ways to Read More Books By Heather Tipton | August 9, 2017 | 0 waystoreadmorebooks
Perhaps it’s been a while since the last time you went to the library—maybe your third-grade teacher made you. But give it a shot; today’s library looks nothing like the dusty shelves you remember. Now they’re well-stocked with the latest titles in a variety of formats, including audiobooks, and since it’s free, it’s a risk-free way to try out topics you’re not usually into. If you’re an eBook reader, check out the Overdrive app. It lets you virtually check out eBooks and audiobooks from your local library for free with a library card
Posted on September 21, 2019 October 3, 2019 2 Comments on 5 Ways to Read More Books By Heather Tipton | August 9, 2017 | 0 waystoreadmorebooks
Falaqaynta Buug Eat that Frog
Cagajiid iyo niyadda oo aaminta in shaqadu ku badan tahay ayaa ka mid ah sababaha dib u dhaca ku keena hawlqabashada qofka. Mark Twain oo ahaa qoraa iyo macallin jaamacadeed caan ahaa oo u dhashay dalka Maraykanka ayaa mar uu dadka ku dhiirrigelinayey sida ugu habboon ee ay uga fogaan karaan ka cagajiidka shaqada waxa uu reebay hal-ku-dheg macnihiisu ahaa, Subaxda hore raha nool cun, wax ka xun oo maalinta inta hadhay aad la kulmi doontaa ma jiro
Twain waxa uu ogaa in aanay jirin hawl ka xun in qofka shaqo looga dhigo in uu rah nool cuno, laakiin haddii shaqadaadu ay taas noqotay, hore isu dhaafi oo weliba hadday laba rah yihiin ka weyn ku bilow subaxda horeba ayaa ay taladiisu ahayd. Haddii shaqada laguu diray teeda ugu dhibta iyo yaq-yaqsiga badan aad ku bilowdo maalintaada inta aanad hawlkalaba u jeedsan, ayaa keenaysa in shaqooyinka kuu hadhay oo dhami noqdaan kuwo naftu ku dhiirrato oo weliba iyada oo ka raalli ah ay dhaqso u samayso.
Qoraagaa iyo dhiirrigeliyaha horumarinta nafta ee lagu magacaabo Brian Tracy ayaa si qoto dheer u sii lafaguray, halkudheggan cunista raha, isaga oo weliba qoray buug uu isla rahan la cunayo sumad uga dhigay. Buuggiisan Eat that Frog (Rahaas cun) oo ka mid ahaa buugaagtii waqtigiisii loogu iibsiga badnaa, ayaa uu ku soo bandhigay habab aad u heersarreeya oo lagaga hortegi karo cagajiidka iyo culayska marar qofku dareemo ee shaqada dib dhiga.
Brian Tracy waxa uu magacan buugga ka soo dheegtay, halkudheggaas uu ka tegey Mark Twain ee ahaa Subax kasta cun rah nool, wax ka xun kuguma dhici karo maalintaas inta ka hadhay oo uu ka wado in hawsha ugu foosha xun ama ugu dhibta badan oo aad waajibaadkaaga shaqo ku bilowdo, adiga oo weliba nafta ku qasbaya in ay qabato, ay keenayso in hawlaha kale ee maalintaas kuu yaallaa ay nafta ugu muuqanayaan kuwo sahal ah oo ay dhaqso u qaban karto.
Ugu horeyna Tracy oo sharraxaya sababta uu magacan ugu xushay buuggiisa, ayaa ku sheegay ujeedada raha cunistiisu in ay tahay in nafta aad ku qasabto hawsha ay ka cagajiidayso oo weliba aad caado ka dhigato in shaqo kasta oo kuu taalla aad ka bilowdo qaybteeda ugu dhibaatada badan ama naftu qabashadeeda diidayso. Dadka guulaysta ama waxtarka yeeshaa waa kuwa shaqadooda qaybta ugu muhiimsan toos u bilaaba, ee naftooda ku qasba in ay si deggen oo maskax iyo Samir leh u waddo shaqadaa illaa inta ay ka dhammaystirayso ayaa uu qoray Tracy.
Talooyinka muhiimka ah ee uu Tracy ku qoray buuggiisa Eat That Frog oo uu mid kasta ku bilaabay erey kooban oo maskaxdu qabsan karto, waxa aynu ku soo koobnay:
1. MIISKA DIYAARI
Marka koowaad naftaada la goaami waxa aad dhab ahaan u baahan tahay in aad qabato, ama hawlaha kuu yaalla iyo halka aad hiigsanayso in aad gaadho. Kaddib warqad ku qor hawlahaas oo aad u soo kala hormarinayso sida ay kuugu kala muhiimsan yihiin, adiga oo aan eegayn sida ay u kala fudud yihiin. Hawl kasta waxa aad ku hor qortaa taariikh aad doonayso in aad dhammaystirto ama in aad gaadho ujeedkaas.
Naftaada ku qasab in aanay marnaba dhaafin muddada ay hawshaas dhammaystirkeeda u qabsatay, maalin kasta samee hawl fudud oo aad ogtahay in ay kugu dhoweynayso gaadhista hawshii cuslayd ee kuu taalla ama ujeedkii aad u socotay.
2. MAALINTAADA HORE KA SII QORSHEE
Halkani sharax badan uma baahna, keliya soo qaado warqad iyo qalin, oo bilow in aad qorto dhammaan hawlaha aad doonayso in aad qabato 24 ka saac ee kugu soo fool leh, adiga oo u dhigaya sida ay u kala muhiimsan yihiin, kaddib bilow hawsha qabashadeeda.
3. KU DHAQAN QAACIIDADA LA YIDHAAHDO 80/20
Cilmibaadhisaha lagu sameeyey isbarbardhigga waxsoosaarka shaqo ee baniaadamka iyo sida uu waqtiga uga faaiidaysto, ayaa xaqiijiyey in boqolkiiba siddeetan guulaha iyo waxqabadka shaqo ee aynu gaadhnaa ay innaga qaataan boqolkiiba labaatan keliya oo waqtigeenna iyo dadaalkeenna ka mid ah. Taas oo haddii si kale aynu u dhigno noqon karta in waqtigeenna boqolkiiba 20 keliya aynu ka faaiidaysanno, dadaalka shaqo iyo fikir ee aynu gelinno hawlaha inoo yaallaana aanu ka badnayn boqolkiiba 20 keliya oo ka mid ah inta aynu awoodi karno.
Marka ay sidaas tahay laba talo ayaa muhiim ah; waa mid ee, in aynu ku dadaalno sidii aynu kor ugu qaadi lahayn ka faaiidaysiga waqtiga iyo dadaalka aynu hawlaheenna gelinayno; midka labaadna waa in, si ay boqolkiiba 20 ka keliya ee aynu waqtigeenna iyo dadaalkeenna ka isticmaalnaa aanu noqon mid aan isaguna waxtar badan yeelan. sida ugu habboon ee aynu taas uga hortegi karnaana waa in aynu nafta barno in aanay hawlo macnadarro ah waqtiga ku lumin, iyo in mar kasta ay ku dadaasho in shaqooyinku sida ay u kala muhiimsan yihiin una kala culus yihiin aynu u galno si aynu waqtigaas boqolkiiba 20 ka ah uga faaiidayno. Mar kasta oo aad hawl qabanayso niyaddak u hay xeerka ah 20/80, kuna dadaal haddii aanad kordhinayn dadaalkaas in aanu intan hoos uga dhicin.
4. KA FEEJIGNOOW CAQABADAHA
Mar kasta fikirkaagu ha ahaato mid waqtiga fog hiigsanaya, shaqada aad qabanaysana ha eegin midhaheeda degdegga ah, sida mushaharka iwm. Laakiin eeg faaiidada aad ka dheefayso waqtiga fog. In aad waqtiga fog iyo natiijada dambe ku xisaabtantaa waxa ay kaa indho-saabaysaa caqabadaha laga yaabo in ay ku horyaallaan oo haddii aad arki lahayd ay shaqadaada wax u dhimmi lahaayeen ama ugu yaraan dadaalkaaga niyadjebin lahaayeen.
5. WELIGAA HA ILLAAWIN KALA MUDNAYSIINTA HAWLAHAAGA
Waa in aad mar kasta qorto isla markaana niyadda ku hayso shaqooyinka kuu yaallaa sida ay u kala muhiimsan yihiin. Maxaa kuu diidaya in shaqooyinka kuu yaalla aad marka hore garato kuwa ay yihiin, marka xigana u kala horreysiiso nidaamka ah, B, T.J oo ah sida ay u kala mudan yihiin u kala horreysii.
In aad shaqadaada sidaa u dhigtaa waa sida ugu habboon ee aad iskaga ilaalin karto in shaqooyinku iska kaa dhexgalaan, ama in aad shaqo aan muhiim ahayn waqtigaaga ku lumiso iyada oo shaqada kuu taallaa aad uga muhiimsan tahay ama uga culus tahay, waxa kale oo ay tani kaa ilaalinaysaa illowga iyo in aad hawlaha kuu yaalla qaarkood ka tagto.
6. NATIIJADA MUHIIMKA AH XOOGGA SAAR
Mar kasta waa in aad shaqadaada u eegto sida ay midhaha ka soo baxayaa muhiimka u yihiin. Xoogga saar hawlaha aad ogtahay in ay raad fiican ku yeelanayaan xaaladda aad ku jirto, sumcad ahaan, maaliyad ahaan, xirfad ahaan, bulsho ahaan iwm. In aad horreysiisato shaqooyinka noocan ahi waxa ay sababaysaa in aad muhiimad siiso shaqada iyo in aad dadaalkaaga ku aaddan xoojiso sidii aad sida ugu habboon ugu dhammaystiri lahayd, adiga oo niyadda ku haya in aad gaadho natiijada aad ka gaadhayso ee kuwa aynu soo xusnay ka mid yihiin.
7. RAAC XEERKA LAGU MAGACAABO WAQTI QASAB AH
Waxaa jira xeer odhanaha, Marnaba ma heli kartid waqti ku filan in aad hawlahaaga oo dhan qabato, laakiin waxa aad mar kasta heli kartaa waqti ku filan in aad qabato hadba hawsha ugu muhiimsan
U fiirso, mararka qaarkood adiga oo u arka in aanad haynin waqti kugu filan, ayaa haddana marka aad ogaato in hawsha kuu taalla ee aanad dhammaystirin, waqtigana u la dahay ay tahay mid muhiim ah oo qabasho laaanteedu khatar ku tahay ama saamayn taban ku leedahay noloshaada, waxa aad arkaysaa adiga oo helay waqti aanad marka hore moodayn in aad hayso, oo shaqadii qabtay ka hor intii aanu waqtigeedu dhicin, haba noqoto in aad dhammayso daqiiqadda u dambaysa ee.
Mar haddaanu waqtigaagu kuu saamaxayn in aad hawlahaaga oo dhan dhammayso raac xeerkan oo hawlaha midho dhalka weyn ama saamaynta dhaqsaha ah kugu yeelanaya hore u qabo.
8. BILOWGA HORTII SI FIICAN U DIYAARGAROW
Ku dadaal in hawl kasta inta aanad bilaabin ka hor, aad si fiican u diyaargarowdo. Weligaa shaqo ha ku gelin si aan qorshe iyo diyaargarow lahayn. Diyaargarowga fiicani waxa uu dammaanad u yahay dhammaystirka ugu fiican ee shaqada iyo in laga gaadho natiijo wax-ku-ool ah.
9. SHAQADAADA BARO
Waajibka halkan waxaa looga jeedaa in aad barato wax kasta oo shaqadaada ku cusub, ama ku soo kordha hadba arrimaha iyo hawlaha aad jeceshay in aad ku xeeldheeraato. Ku dadaal in aad adigu wax isbarto. Hubka ugu fiican ee arrintan aad u adeegsan kartaa waa wax-akhris joogto ah iyo in aad raadraadiso wax kasta oo cusub, kana feejignaato in ay ku dhaafaan aqoonta iyo waayo-aragnimada hadba ku soo kordha shaqadaada.
10. AQOONSI AWOODDAADA XIRFADEED
Mar kasta naftaada ka warayso, hawsha ay is leedahay si xirfad iyo kartiyi ku jirto ayaa ay u qaban kartaa. Is weydii, awoodahaaga gaarka ah. Ogow waxa aad dadka kale dheer tahay. Suaalaha noocan ahi waxa ay kor u qaadayaan kalsoonida aad naftaada ku qabto, waxa aanay ku barayaan waxa aad dadka kale dheer tahay ee aad tahay in aad ka faaiidayso.
11. SUNTO CAQABADAHA KU HORYAALLA
Hawl kasta oo aad qabanayso, inta aanad bilaabin waa in aad xadiddo caqabadaha kaa hor iman kara. Baro taakooyinka horyaalla horumarka aad doonayso. Ha ku dagmin in aad caqabadaha qaar yaraysato, iyada oo naftaadu ku siinayso kalsooni ah in aad si sahal ah uga gudbi karto.
Waxaa muhiim ah in aad aqoonsato caqabadahaas. Kaddib bilowg in aad si xeeldheer uga fikirto sida aad uga takhalusi karto, midiba ta ay ka soo horreyso. Waa hab aad uga fiican habka ah in aad hawsha gasho adiga oo aan ogeyn caqabadaha kaa hor iman kara, kaddibna hadba ta kaa hor timaadda uun arka, ta xigtana suga. Taasi waxa ay keeni kartaa niyadjab iyo in hadba caqabad aanad sii ogeyn barashadeeda iyo fahamkeedu waqti kaa lumiyaan.
Ku dhaqan siyaasadda ah, tallaabo tallaabo in aad hawlahaaga u qaaddo. Weligaa ha ku degdegin in aad natiijada gaadho adiga oo aan hawshaba bislayn. Dooro bartilmaameed sugan, qor tallaabooyinka is xiga ee ay tahay in aad qaaddo si aad u gaadho bartilmaameedkaas, kaddib bilow tallaabo tallaabo in aad u gasho hawsha kaa xigta gaadhista natiijada aad hiigsanayso. Waxaa hubaal ah in haddii aad habkan raacdo aad arki doonto natiijo aad kaaga farxisa.
13. NAFTAADA CADAADIS SAAR
Waa in aad samaysato hab aad adigu isku waajibisay oo aad naftaada cadaadis ku saarayso. Waxaa ka mid ah in aad ku dadaasho in hawl kasta oo aad qabanayso aad u yeesho ballan kama dambays ah oo aad hawl ku dhammaystirayso iyo waqtiga aad doonayso in aanay kula dhaafin gaadhista hawshaas (Deadline). Samayso jadwal hawleed nidaamsan oo aad u marayso hawshaas. Naftaadana ku riix joogtaynta hawshaas iyo in aanad ka caajisin.
14. LABAN-LAAB AWOODDAADA SHAKHSIGA AH
Baro heerka tamartaada iyo awoodda kugu jirtaa inta ay leeg tahay, sida awoodda aad u leedahay gudashada waajibaadka kuu yaalla. Baro awoodda aad u leedahay jimicsiga, wax-akhriska, iyo waqtiyada ugu fiican ee ay kugu jirto firfircoonida ugu fiican ee aad waajibaadkaaga ku qabsan karto. Kaddib bilow in aad ku dadaasho sida ugu habboon ee waqtiyada kalana aad ku kordhin karto awoodahaaga, iyo tamarta kugu jirta.
Hababka ugu habboon ee aad awoodahaaga shakhsiga ah ku kordhin karto waxaa ka mid ah, in aad cunto caafimaad qabta si caafimaadka ku habboon u cunto, jimicsi joogto ah in aad samayso, in aad hesho saacado hurdo oo kugu filan.
15. NAFTAADA DHIIRRIGELI
Joogtaynta kutub akhrisku, waxa ay maskaxda siisaa awood iyo habfikir tolmoon oo ay kaga gudbi karto dhibaatooyinka soo waajaha, waxa kale oo ay qofka gelisaa dhiirrigelin uu dulqaad ugu yeelan karo culayska ay leeyihiin gudashada hawlaha ka sokeeya gaadhista ujeedkiisa.
Dhegeysiga muxaadarooyinka ka warramaya horumarinta nafta, ka qaybgalka duruusta iyo tababarrada dhisidda shakhsiyadda iyo horumarinta nafta, iyo la macaamilka dadka raadka togan iyo aqoonta ku reebaya maskaxdaadu intuba waxa ay ka mid yihiin siyaabaha aad naftaada u dhiirrigelin karto.
16. KU TABABARO DIB U DHIGISTA WAXTARKA LEH
Waxa ay culimada cilminafsigu sheegeen in inta badan uu qofku ka baqo bilowga hawlaha ku cusub; culayska shaqada oo u uu arko in aanu qaadi karin, ama aqoon lahayn, iyo sababo la mid ah ayaa ku keeni kara in uu ku dhici waayo bilowga hore ee shaqada, muddana uu ka warwareego gudo galkeeda. Sida ugu habboon ee uu kaga bixi karaa waa in uu naftiisa u sheego in ay hawshaas qaban karo, kuna kalsoonaado kartidiisa. Laakiin waxaa jira dib u dhigis shaqo oo isagu waxtar leh.
Inta aanad shaqada bilaabin qor liiska hawlaha kuu yaalla, kaddib ka fikir sida ay u kala muhiimsan yihiin, kuna dadaal in aad dib dhigato shaqooyinka aad ogtahay in aanay ku dhaafayn ama ugu yaraan in khasaaraha ka imanayaa ka yar yahay khasaaraha ka imanaya dib u dhigista hawlaha kale ee kuu yaalla. Marka ay hawl muhiim ahi ku taallo dib u dhigo daawashada barnaamijyada iyo filimada aad xiisaynayso, sida oo kale dib u dhig ama iska jooji ballamaha haasaawaha asxaabta iyo nasashada ah ama aan lahayn faaiido la mid ah faaiidada ay leeyihiin hawlaha kale ee kuu yaallaa.
17. HAWLAHA ADAG KU HORREE
Maalin kasta marka aad toosto waxa aad dejisataa ama habeennimadii sii dejisataa liiska hawlaha kuu yaalla oo dhan, kaddib u kala hormee sida ay u kala culus yihiin. Shaqadaada ku bilow hawlaha culayska ama adayga lagu tirinayo. Qodobkani waa ka uu u taagan yahay magaca buugga aynu qormadan ka soo qaadannay ee ahaa, Cun rahaas gaar ahaan ha ku dhegga ahaa cun rahaas weyn.
18. ABLA-ABLEE HAWLAHA KUU YAALLA
Si ay kuugu fududaato in hawlaha u kala fuliso sida ay u kala muhiimsan yihiin, waxa aad u baahan tahay in aad hawsha lafteeda qaybo yaryar u qaybiso ama goballo ka dhigto, si fulinteedu u fududaato. Hawsha aad jajebisaa waxa ay kaa qarinaysaa baaxadda hawsha kuu taalla oo laga yaabo haddii aad mar wada eegto in ay niyad jab kugu riddo.
19. WAQTIGAAGA SEERO KU KALA XIDH
Siyaabaha ugu fiican ee waqtiga qiimihiisa aad ku dareemi karto, isla markaana ku garan karto horusocodka hawsha aad waddaa samaynayso iyo in aad waqtiga sidii saxda ahayd uga faaiidaysanaysaa waa in aad waqtigaaga u kala xidho qaybo, aad mid kasta ku xisaabtanto waxsoosaarkiisa; sida toddobaad, bil ama sannad, adiga oo mid kasta hawl u gaar ah ku sargoynaya.
Tusaale ahaan hal toddobaad waxa aad gaar uga dhigtaa hawl ah in aad subaxdii oroddo, (Jimicsi), ama bil waxa aad waqti goan u xidhaa in aad internet baadho si aad uga hesho xogta aad u baahan tahay, ama hal sano waxa aad nafta saartaa in ay ka jibbo keento barashada af (Luuqad) iyo wixii la mid ah. In aad waqtigaaga sidaas u kala xidhaa, waxa ay aad u dhiirrigelinaysaa in naftu ku xisaabtano waqtiga oo ay ku dadaasho in hawsha u taalla ay dhammayso inta aanu dhammaan waqtiga aad u goysay.
20. SAMAYSO DAREENKA XAALADAHA GAARKA AH
Waqtigaaga oo dhan ha ku buuxin gudashada waajibaadka shaqo ee kuu yaalla. In waqtigii aad shaqada u qoondaysay ay hawl kale oo daruuri ahi kaa soo dhexgashaa waxa ay sababi kartaa in xagaldaac ku yimaaddo habsami u socoshada qorshihii aad wadatay. Si aanay taas kuugu dhicin, waxa aad mar kasta qoondaysaa waqti firaaqo ah oo aad ugu talagasho gudashada waajibaadka degdegga ah ee soo baxa.
21. SHAQADA AAD GACANTA KU HAYSO XOOGGA SAAR
Iska jir in aad maskaxda u dirto halwo is burinaya oo tiro badan. Marka aad shaqo bilowdo, ku dadaal in aad dib u dhigato hawlaha kale ee aanay ahayn waajib degdeg ah ama shaqo si caadi ah loogu dhex qaban karo shaqada aad gacanta ku hayso. Ku dadaal in aad barato kuna tababarato xirfadaha iyo cilmiga kaa caawinaya hal-abuurka iyo wanaajinta shaqada aad qabanayso.
http://ecoahmed.blogspot.com/htmlCagajiid iyo niyadda oo aaminta in shaqadu ku badan tahay ayaa ka mid ah sababaha dib u dhaca ku keena hawlqabashada qofka. Mark Twain oo ahaa qoraa iyo macallin jaamacadeed caan ahaa oo u dhashay dalka Maraykanka ayaa mar uu dadka ku dhiirrigelinayey sida ugu habboon ee ay uga fogaan karaan ka cagajiidka shaqada waxa uu reebay hal-ku-dheg macnihiisu ahaa, Subaxda hore raha nool cun, wax ka xun oo maalinta inta hadhay aad la kulmi doontaa ma jiro
Posted on September 21, 2019 September 21, 2019 Leave a comment on Falaqaynta Buug Eat that Frog
Dhaqaalaha Somaliland Miyuu Kobcayaa
Dad badan ayaa ku warma arrinta, bal aan isku dayo inaan si kooban uga hadlo dhaqaalaha Somaliland 10kii sano ee aynu soo dhaafnay (2007 – 2019).Koboca dhaqaalaha (economic growth) waxa lagu ogaadaa dhawr arrimood:
1.Wax iibsiga macmiisha
Dhaqaalaheenu waa mid inagu kooban inaga oo aan waafaqsanayn qaar ka mid farsamooyinka caalamka lagu ogaado koboca dhaqaalaha. Tusaale, ma jirto xogo sheegaya awooda wax iibsiga macmiisha (consumer spending). Sidoo kale ma jirto xogo rasmi ah oo qeexaya dakhliga iyo wax soo saarka dalka (GDP and per capita output). Mida kale ma jirto xog dhab ah oo ku salaysan qiyaasta sicir bararka (inflation rate) iyo dulsaarka bangiyadu bixiyaan (interest rates) marka laga saaro macluumaad aan hufnayn oo ay soo ururiyaan Wasaaradaha Ganacsiga, Maaliyada iyo Qorshayntu.
Waxa kale oo aan iyana la haynin dheelli-tirka ganacsiga aynu is dhaafsano waddamada kale (trade balance) sida Itoobiya oo ah waddanka inaga hela dakhliga ugu wayn isla markaana inaga qaata lacagta ugu badan ee adag ee dalkeena ka dhoofta (flight of hard currency) kuna baxda: Qaadka, Khudrada, Jaamacadaha, Sibidhka, Xoolaha iwm. Waxa lagu qiyaasaa lacagta Itoobiya sannadkii inaga qaado ilaa $670 Malyuun.
Hadaba hadii aynu ku soo noqono suaasha ah dhaqaalaha Somaliland ma koray 10kii sano ee aynu soo dhaafnay? Jawaabtu waa haa in kasta oo ay adagtay in qiyaas dhab ah lagu sugo arrintan, hadana waxa loo malaynayaa inuu dhaqaalaheenu kobcay mudadaa aynu soo sheegnay guud ahaan inta u dhaxaysa 6% ilaa 9% sannadkiiba.1.WAX IIBSIGA MACMIISHA (CONSUMER SPENDING)
Waxa aan shaki ku jirin in uu wax iibsiga macmiishu xoog u kordhay 10 sano ee la soo dhaafay sida ka muuqata arrimaha hoos ku qoran:
1: Waxay macmiishu dhisatay guryo tiro badan oo keenay inay magaalooyinku u fidaan dhinac kasta. Waxa lagu qiyaasaa inay magaalooyinka dalku 35% fideen.
2: Waxa la dhistay rugo ganacsi oo waawayn (shopping malls) oo laga dukaansado.
3: Toban sano ka hor gaadidka dalka jooga tiradiisu wuxu ahaa 36,000. Maantana waxay kor u dhaafeen 100,000 waxay tirada gaadiidku korodhay 277%
2. WAX IIBSIGA ADEEGYADA (SERVICES SECTOR)
Maadaama dhaqaalaha dalku kobcayay waxay bulshadu awood u heshay inay iibsato adeegyo tiro badan sida ku xusan halkan:
1: Waxa dalka ka jira in ka badan 6 shirkadood oo diyaaradaha ah oo duulimaadyo kala duwan sameeya, halka ay 2009 kii jireen 2 diyaaradood, waxana kordhay ilaa 300%.
2: Waxa dalkan laga hirgeliyay in ka badan 15 hudheel oo waawayn iyo meherado kale ayaa la furay. 2009 kii waxa ka jiray dalka ilaa 5 Hoteel oo waawayn, waxan kordhay ilaa 300%.
3: Waxa dalka laga furay in ka badan ilaa 13 rugo caafimaad ama dhakhtar iyo xarumo caafimaad oo waawayn, halka 2008 kii ay jireen 4 rugo caafimaad waxana kordhay 325%.
4: Dhinaca waxbarashada waxa ku dhacay koboc wayn taas oo keentay in ilaa 19 Jaamacadadood oo cusub laga furay iyo weliba dugsiyo tiro badan, halka 2008 kii ay jireen 7 Jaamacadood, waxana kordhay 271%.
5: Dhinaca adeega Isgaadhsiinta, maanta waxa telefoon haysta dad ka badan 920,000 oo qof halka 2009 lagu qiyaasi jiray ilaa 160,000. Waxa ku kordhay 575%.
6: Dhinaca Bangiyada 2009 dalka kama ay jirin wax bangiyo ah oo gaar loo leeyahay, maanatana waxa ka jira ilaa 4 Bangi.
3.SHAQO ABUURKA (EMPLOYMENT SECTOR)
Shaqo abuurka iyo shaqaalayntu waa astaamaha lagu garto inuu dhaqaalaha dal uu kobcay iyo in kale, waxana loo qaybiyaa shaqaalaha dawliga ah (public sector employees) iyo kuwa gaarka ah (private sector employees). Koboca dhaqaalaha dalku 10 kii sano ee la soo dhaafay wuxu keenay in labada dhinacba ay kordhaan shaqaalaha loo qaatay:
1: Dhinaca dawlada tirada shaqaalahu (marka laga reebo ciidamada) wuxu ahaa ilaa 6,800 maantana waa 14,000 taas oo micnaheedu yahay waxa ku kordhay 205%.
2: Dhinaca private ka ma jirto tiro sugani lakin waxa lagu qiyaasaa inuu xoog u kordhay marka la eego inta ganacsi ee furmay mudadaa 10 sano ah.
4.MIISAANIYADA DAWALADA (GOVERNMENT BUDGET)
Miisaaniyada ay dawladu isticmaashaa waa astaan kale oo lagu garto dhaqaalaha sida uu u kobcayo, tani waxay ku dhisantahay dakhliga dawlada oo la kordhaysa dhaqaalaha. Hadii aanu dhaqaaluhu kobcayn waxay ku kelifaysaa dawladu si ay miisaaniyad u hesho inay kordhiso cashuurta.
1: Hadii aynu eegno 10 sano ka hor miisaaniyada dawladu waxay ahayd $42 Malyuun oo doolar, maantana waxa lagu qiyaasaa inay tahay $360 Malyuun. Taa micnaheedu waxa weeyey waxa ku kordhay ilaa 857%.
Maalgashigu wuxu ka mid yahay waxyaalaha lagu ogaado korodhka iyo koboca dhaqaalaha. Somaliland waxa 10 kii sano ee la soo dhaafay ka dhacay maalgashi ballaadhan oo ay shirkado gudaha ah, kuwo debeda ah iyo hayado caalami ahi ku sameeyeen, waxana ka mid ah kuwan:
1: Coca Cola: $17 Malyuun
2: DAI (USAID): $33 Malyuun
3: SBF (World Bank): $23 Malyuun
4: SDF (Multi-donor): $65 Malyuun
5: Kuwait: $14 Malyuun
6: GIZ/KFW: $63 Malyuun
7: UAE: $92 Malyuun
DP World: lacagtii maalgashiga ahayd ee ay ku ballanqaaday DP WORLD in ay dalka galiso. Waxa muhiim ah in la xuso $442 Malyuun ee la sheego DP World ma wada gelinayso dalka. Waxay gelinaysaa $225 Malyuun (51%). Labada saami ee kala waxa kala leh Somaliland ($132 Malyuun 30% oo loogu qiimeeyay dekedii disnayd) iyo Itoobiya ($83 Malyuun 19%), ilaa iminka lama garanayo Itoobiya wakhtiga ee keenayso saamigeeda iyo sifaha ay u bixinayso lacagta.
Si kasataba ha ahaatee waxa aan shaki ku jirin inuu dhalaaqalaha dalku si wayn kobcay 10 kii sano ee aynu soo dhaafna marka lagu eego indho dhaqaale yahan. Waxase aanu shaki ku jirin in la kala tegay oo ay dadka wax haystaa sii xoogaysteen kuwii aan wax haysanina aanay wax badani u kordhin, waana arrin loo baahanyahay inay xukuumadu fiiro gaar ah u yeelato.
In kasta oo uu sida aynu sheegnay dhaqaalaha dalku sameeyay koboc ballaadhan hadana waxa jira carqalado loo baahanyahay in wax laga qabto si dhaqaalahu u sii kobco bulshaduna ka hesho waxtar noloshooda wax ka bedela. Hadaba talooyin wax lagaga qaban karo carqaladahaas ayaan soo jeedinayaa:
1: Cashuuraha waa in la khafiifiyaa gaar ahaan waxyaalaha daruuriga ah si ganacsatadu aanay u qaali garayn maciishada iyo agabka muhiimka ah (less tax for essential goods).
2: In la sameeyo sharciyada khuseeya koboca ganacsiga sida: Xeerka Maalgashiga ee ka Maxaliga ah (domestic investment law) iyo wax ka bedelka Xeerka Maalgashiga Dibeda (foreign investment law).
3: In la sameeyo Xeerka Kala Xadaynta Ganacsiga (commercial code).
4: In La sameeyo Xeer joojinaya kootada cido gaar ah ganacsiga loogu xidhayo (anti-monopoly legislation).
5: In dadka la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan (employable skills).
6: In la xakameeyo sicir bararka iyo hoos u dhaca lacagta dalka (tackling inflation and Somaliland Shilling depreciation).
7: In la furfuro dhaqaalaha oo la kaabo ganacsatada taas oo keeni doonta koboc/shaqo abuur baahsan (quantitative easing).
8. In la xoojiyo wax soo saarka gudaha si loo yareeyo in wax kasta la soo dejiyo (increase local production to reduce imports).
9. In la xoojiyo kaabayaasha dhaqaalaha sida waddooyinka, garoomada diyaaradaha, dekedaha, laydhka iyo biyaha iwm (economic infrastructure).
10. Waa in xoolaha aynu dhoofino la tayeeyaa isla markaana suuq loo helaa “sidoo kale waa in aan lagu tiirsanan dhoofinta xoolaha oo kaliya” (quality of our livestock must be improved and export markets found Diversification of Economy ).
11: In la dagaalanka musuqa baahsan laga dhigto mudnaanta koowaad (fighting against corruption must be made number 1 priority).
12: In horumarka dhaqaaluhu wada gaadho gobolada dalka oo dhan (economic development must reach in all regions).W/Q : Ahmed Yousuph Hassan
Hargeisa Somaliland .
Posted on September 21, 2019 September 23, 2019 Leave a comment on Dhaqaalaha Somaliland Miyuu Kobcayaa
Posted on March 9, 2018 March 9, 2018 Leave a comment on The Journey Begins